अल्बर्ट Demchenko जसको जीवनी यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ, एक पौराणिक रूसी लुगर, सात-समय सहभागी र तीन-समय ओलम्पिक medalist छ। धेरै पटक उहाँले रूसी र युरोपेली च्याम्पियनसिप मा, विश्व कप उभिरहेका रूपमा साथै जित्यो।
Demchenko अल्बर्ट Mihaylovich 1971 मा, Chusovoy को सानो शहर metallurgists को परिवार मा पर्म क्षेत्र मा स्थित मा जन्म भएको थियो। उहाँले पाँच छोराहरू जेठो थियो। अल्बर्ट गरेको बाल्यकाल शान्त भनिन्छ गर्न सकिँदैन: उहाँले एक tomboy र हावी अप भयो। स्कूलमा अध्ययन कठिनाई उहाँलाई दिइएको थियो। मात्र मनोरञ्जन गर्ने खेलाडी गरेको स्लेज भविष्य थियो। र तिनीहरूले स्क्रैप सामाग्री बनाइएका थिए - बुबा केही पाइप पकाएको र बोर्ड माथि तिनीहरूलाई ढाकिएको। यी sleds मा छ र आफ्नो पहिलो अवैतनिक प्रशिक्षण Demchenko अल्बर्ट बिताए।
उच्च स्कूल पछि, भविष्यमा शीर्षक लुगर को मानविकी र सामाजिक संस्थाहरू आफ्नो अध्ययन जारी राखे। भारी 90 को दशक बचाउनुभयो र परिवार Demchenko थिएन। अल्बर्ट विभिन्न अध्ययन पैसा को खोज मा लागि जब हेर्न बाध्य भएको थियो। उहाँले बजार मा ड्राइभरको यो पेशामा, एक भरिया, एक tiler, र मासु विक्रेता सिक्न थियो। तर अस्थायी कठिनाइ स्लेज लागि आफ्नो आवेग निरुत्साहित गर्न सकिएन।
गम्भीर पछि लाग्न टोबोग्यानिङ Demchenko तातियाना Yuferova निर्देशन अन्तर्गत 1984 मा सुरु भयो। छ वर्षपछि अल्बर्ट सोभियत संघ को एक कल-अप प्राप्त गर्दछ। तर पहिलो सफलता रूसी टोली पहिले नै उहाँलाई आए।
1996 मा युरोपियन च्याम्पियनसिपलाई मा Demchenko डबल्स मा एकल मा चाँदी र कांस्य जित्यो। त्यसपछि, आर्थिक संकट र स्वास्थ्य समस्या कारण एक ब्रेक पछि, अल्बर्ट खेल फर्के। को 2004/2005 सिजन उहाँले व्यक्तिहरूलाई बीच विश्व कप जीत प्रबन्धन।
त्यसपछि पूर्व-ओलम्पिक सिजन आयो। Demchenko अल्बर्ट, नाइस मा एक चाँदी पदक जीत साथै एकल मा युरोपियन च्याम्पियनसिपलाई जीत व्यवस्थित छ। दुई वर्षपछि एक को कन्टिनेन्टल च्याम्पियनशिप मा दोस्रो स्थानमा रूसी Chezane मा लुगर, र 2010 यूरोपीय च्याम्पियनशिप उहाँलाई विजयोल्लास विजय लागि समाप्त हुन्छ। यसको सफलता Demchenko Paramonovo मा आफ्नो पैतृक ट्रयाक मा दुई वर्ष पछि पटक-पटक।
सोची ओलम्पिक सातौं लागि अलबर्टा लागि हुन मानिन्छ थियो। तयारी अधिक राम्ररी भन्दा अल्बर्ट व्यक्तिगत स्लेज नयाँ मोडेल विकास संलग्न थियो, समानान्तर यो संग Sigulda मा सुन युरोपेली च्याम्पियनसिप संग पुरस्कार को आफ्नो संग्रह पूरा गर्न गरियो। र 2014 ओलम्पिक थाले। पहिले नै Demchenko एक Corona भएको छ जो एकल, साथै अल्बर्ट रिले भाग लिए। र धेरै राम्रो तरिकाले - उहाँले दुई चाँदी पदक जित्यो।
सोची मा ओलम्पिक पछि, 43 वर्षीया लुगर आफ्नो लामो अन्त घोषणा र पौराणिक खेल क्यारियर हुन्छन्।
अल्बर्ट Demchenko पत्नी संग ओल्गा दिमित्रोव मा मास्को नजिक बस्थे। तिनीहरूले एक छोरी भिक्टोरिया, आफ्नो बुबाको पाइला पछ्याए र गम्भीर गर्ने टोबोग्यानिङ उठाए पनि उठायो।
ओल्गा Belyakova: जीवनी, फोटो
Alexey Volkov - रूसी biathlete टोली
जो अर्को शीतकालीन ओलम्पिक खेल पाहुना हुनेछ? हामी पहिले देखि नै शीतकालीन ओलम्पिक 2018 को राजधानी थाहा
Homskiy Noam: उद्धरण
बोरिस Babochkin: जीवनी र Filmography
घरहरू थर्मल इन्सुलेशन - किन आवश्यक छ?
स्वादिष्ट र स्याउ देखि घरमा मीठो चकलेट: खाना पकाउन कसरी?
निदान melanoma: तरिका, समीक्षा
बादाम भन्दा उपयोगी?
अभिनेत्री ओल्गा Naumenko: जीवनी, परिवार र काम गर्ने